MACLUUMAADKA EYGA SAMOYED IYO SAWIRADA - EEYAHA
Macluumaadka Eyga Samoyed iyo Sawirada
Kala toosi Samoyed-ka 1 1/2 sano jir
Liiska eeyaha Samoyed Mix Breed
Samoyed wuxuu leeyahay jir is haysta oo muruqsan. Madaxa qaab-goobeedku wuu ballaadhan yahay waxyarna waa loo caleemo saaray. Xuubku wuxuu u dhigmaa xajmiga eeyga, isagoo sanka taabanaya. Joogsiga si fiican ayaa loo qeexay laakiin lama filaan ah. Midabka sanku wuxuu noqon karaa madow, bunni ama beer. Dibnaha ayaa madow. Ilkaha waxay ku kulmaan qaniinyada maqaska. Indhaha mugdiga ah, ee yicibta u eg ayaa qoto dheer, xoogaa kala fog, oo leh dabool hoose iyo cirifka madow. Dhegaha, saddex-geesoodka taagsan ayaa wax yar lagu soo koobay talooyinka. Dabada ayaa si dhexdhexaad ah u dheer, oo sifiican loogu daboolay timo, oo lagu qaaday gadaal gadaal. Lugaha waa adag yihiin waana muruqsan yihiin cagtuna waa siman yihiin oo timo ayaa ku daboolan. Qarada weyn, jaakad laba jibbaaran ayaa badan. Koodhka hoose waa mid jilicsan, gaaban oo qaro weyn leh timo dhaadheer oo u soo baxaya ilaa jaakadda sare. Dharka kore waa qallafsan yahay oo toos ayuu u taagan yahay, ma lihid. Koodhadhka ragga ayaa ka quwad badan dumarka ’. Waxaa jira qoorta qoorta iyo garbaha, oo isku dhejinaya madaxa. Midabada Coat-ka waxaa ka mid ah caddaan saafi ah, buskud, jaale iyo kareem. Mararka qaarkood cad oo leh talooyin lacag ah. Cadaan saafi ah ayaa laga door bidaa giraanta bandhiga.
Samoyed waa eey jilicsan. Aad u daacad ah, fudeyd leh, saaxiibtinimo leh oo ciyaar badan, way jeceshahay qof walba. Waxay si farxad leh saaxiibtinimo ugu noqon doontaa dhammaan, oo ay ku jiraan kuwa ku soo xadgudbay . Waa mid saaxiibtinimo leh in loo isticmaalo wax badan ilaalin ahaan, in kasta oo jilifkiisu kaa digayo joogitaanka shisheeyaha. Waxay raalli ka tahay la qabsiga nolosha qoyska oo ay si wanaagsan ula noolaataa carruurta. Waa mid caqli badan, waxayna ka jawaabi doontaa tababarka adag, tababarka bukaanka, oo ay tahay in lagu bilaabo da'da hore. Hubso inaad tahay eeygan adag, kalsooni leh, iswaafaqsan hogaamiyaha xirmada si looga fogaado kartida arrimaha dhaqanka sida, laakiin aan ku xaddidnayn, ciyey waswaas ah. Sammy wuxuu caadeystay inuu la shaqeeyo kooxo, wuxuuna muujiyaa tayo wanaagsan. Marka eeygan la siiyo waxa ay u baahan tahay inuu noqdo eey maskax deggan, yacni ku filan jimicsi maskaxeed iyo mid jireed , oo ay weheliso hoggaan cad, waxay caddaynaysaa inay tahay mid heer sare ah, dabeecad wanaagsan, nool oo bulsheed. Marnaba dhib ma dooneyso laakiin waxay la tacaali kartaa cadow haddii loo baahdo. Eeyahani waxay sumcad ku leeyihiin inay wax cunaan. Haddii Sammy ka maqan tahay hoggaamin iyo / ama jimicsi aad bay u noqon kartaa wax burburinaysa hadii kaligaa laga tago saacado badan oo fidsan. Samoyeds waxay la jaan qaadi karaan xayawaannada aan xayawaanka ahayn markii laga soo koriyo eeyaha ama markii si habboon loo tababaray inay sidaa sameeyaan, hase yeeshe waxay leeyihiin dareen ugaarsi ah waana in taxaddar laga muujiyaa xayawaannada kale ee yaryar. Waxay la heshiin karaan bisadda qoyska. Noocani wuxuu leeyahay dareen lagu dhaqdo.
Dhererka: Ragga 21 - 23½ inji (53 - 60 cm) Dumarka 19 - 21 inji (48 - 53 cm)
Miisaanka: Ragga 45 - 65 rodol (20½ - 30 kg) Dumarka 35 - 50 rodol (16 - 20½ kg)
Samoyeds waxay si gaar ah ugu nugul yihiin dysplasia misigta qaarkoodna waxay la xanuunsadaan cudurka macaanka. Sidoo kale u nugul xasaasiyadda maqaarka Waxay u nugul yihiin PRA (indhaha), ugu horreyn eeyaha labka ah.
Samoyed-ku kuma fiicnaan doono guri dabaq ah haddii si ku filan loo jimicsado. Waa mid aad u firfircoon gudaha dhexdiisa iyo daarad yar ayaa ku filan. Dharkeeda culus waxay ka dhigeysaa eeydan kuwo aan ku habboonayn nolosha cimilada aadka u kulul.
Wuxuu ubaahan yahay qadar jimicsi macquul ah, oo ay kujirto maalinle soco ama orod. Si fudud u qaad inta lagu jiro cimilada diirran maxaa yeelay dharka dhogorta ee dhogorta leh ayaa horjoogsanaya luminta kuleylka la dhisay inta lagu jiro jimicsiga.
Qurxin ballaaran ayaa loo baahan yahay. Iyagu waa xilli-daadiyayaal culus. Dharka laba-labiska ah ee qalafsan ayaa u baahan cadayasho joogto ah, laakiin wuxuu u eg yahay inuu caddaan ahaado isagoon maydhin. Qaar ka mid ah dadka xasaasiyadda ku leh ayaa soo sheegay in jaakada Samoyed aysan iyaga dhibin.
Samoyeds waa nooc hore oo shaqo ah. Waxay ku noolaayeen Siberia ugaarsato iyo kalluumeysato loo yaqaan Samoyeds, sidaa darteed halkaasoo ay caanahu ku heleen magaceeda. Dadka Samoyed-ka waxay u adeegsadeen eeyaha inay jiidaan shabaqooda, ilaashadaan hantidooda iyo dhaqashada xoolaha. Xarunteeda hidde-wadaha waxay xiriir dhow la leedahay eygii hore oo aan yeey iyo dawaco isku dhafan. Eeyadu waxay la seexdeen dadka si ay u diiriyaan. Robert Scott, oo ah sahamiyayaal, ayaa eeyaha keenay Ingriiska 1889. Waxay ahayd England dhexdeeda in taranka la sii horumariyay halkaasna uu kaga fiday adduunka intiisa kale. Waxaa aqoonsaday xisbiga AKC sanadkii 1906dii.
Holly Samoyed oo 3 sano jir ah oo lugeynaya Lake Lake ee England
Waxaas yar ee la jeclaan karo waa Ani oo 3 bilood jirta.
'Kani waa sawirka laba gabdhood oo lix jir ah oo Samoyed ah (Miki iyo Su) oo ciyaaraya. Labadooduba waa la badbaadiyey dhowr sano ka hor, laakiin weli waa kuwo firfircoon oo ciyaar leh. Waxay jecel yihiin caruusadaha 'jiida' iyo alaabada lagu ciyaaro ee xiisaha leh, laakiin sidoo kale waxay aad u isticmaalaan Nylabones. Labadaba waa laga fasaxayaa xadiga maalin kasta meelaha aan haysan duurjoogta iyo xoolaha. Daanyeerayaasha soo booqda beerteenna waxay ku leeyihiin wakhti adag. Sammiyadu aad ayey u caqli badan yihiin - way furi karaan albaabada, daari karaan tubbada nooca lever-ka ah waxayna fahmi karaan ereyo badan (amarro badan ayaa la fahmay, laakiin qasab maaha in la adeeco!). Jaakadaasi waa hawl qabow xilliga qaboobaha, xaddiga dhoobo ah ee ay hayn karto, iyo markay daadinayso, laakiin burushka maalinlaha ah ayaa iyaga ku raaxaysta. Ma lahaan laheyn nooc kale, caqligooda, dabacsanaantooda iyo caqligooda, dabeecadooda farxad darteed. '
Sawirka 'daadinta' waa jaakad laga soo saaray hal eey hal fadhi! '
'Waxaan ka soo badbaadinay Lexus bulshada maxalliga ah ee aadmiga markii ay jirtay 8 sano. Ma aysan sameyn ogow sababta mulkiilaheeda uga tagay , laakiin iyadu farxad bay noo ahayd tan iyo markii aannu helnay. Iyadu waa qof caan ah oo caan ku ah samoyed inkasta oo ay da 'weyn tahay haddana ma caawin karno laakiin jacayl baa ku dhacay markaan aragnay. Waxaan keenay gurigeeda waxayna ka mid ahayd qoyskeena tan iyo markaas. Si kastaba ha noqotee, maalintaas ugu horreysay waxaan ogaanay inay jeceshahay xayawaanka cufan! Waxaan u oggolaanay inay iska hubiso gurigeenna oo waxaan ka helnay iyada oo ordaya iyada oo afka xambaarsan orso xamaasadeysan. Waxaan qabsaday sawir iyada oo jeexjeexay odaygii yaraa ee miiska foosball-ka hoostiisa. Ka dib markii ay ogaatay in wax walba aysan ahayn wax ay ku ciyaaraan ee ay ku habboon tahay. Waan jecel nahay Lexus mana culeys ka saari karno sida ay u weyn tahay badbaadinta xayawaan rabaayadeed.
Lexus Samoyed oo 8 jir ah
poodle qasan sarkaal oo dahab ah
Eeg tusaalooyin badan oo Samoyed ah
Sawirada Samoyed 1
Sawirada Samoyed 2
schnauzer muqisho isku darka SUNTZU shih
king charles iskudhafka cavalier maltese
bulldog american iyo adhijirka Jarmalka isku dhafan
alaskan malaamute madow iyo cadaan
sawirada eeyaha yorkie poo